Faah faahin:- Dagaal aad u culus oo haatan ka soconaya qeybo ka mid ah gobolka Sh/hoose – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaal aad u culus oo haatan ka soconaya qeybo ka mid ah gobolka Sh/hoose
Wararka naga soo gaaraya gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in dagaal aad u culus uu weli ka soconayo qeybo ka mid ah gobolkaasi, kaas oo sida la sheegay u dhaxeeyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa AMISOM iyo dagaalyahanadda Al-shabaab oo iyagana dhinac ah.
Dagaalkaan oo haatan weli socdo ayaa la isku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana uu dagaalkaan bilawday saakay aroortii, kadib markii ciidamada huwanta ay weerar culus dhowr jiho kaga qaadeen deegaano ka tirsan gobolka Sh/hoose.
Ciidanka huwanta ah ayaa la sheegayaa inay ugu dambeyn u suurto-gashay inay la wareegeen deegaanada kala ah; Jannaale, Bariire, Farsooley iyo Mubaarak, iyagoona weli kusii jeeda deegaanka Awdheegle ee gobolka Sh/hoose.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi, waxayna warar qaar sheegayaan in illaa 10 qof oo dhinacyada dagaalamaya ah ay ku dhinteen, halka warar kalena ay sheegayaan in tirada dhimasho ay intaasi ka badan tahay.
Dhinaca kale, saraakiil ka tirsan Al-shabaab ayaa goordhaw sheegay in dagaalyahanadooda ay iska caabiyeen weerarka uga yimid dhinaca ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, iyagoona tilmaamay in ciidankaasi ay weerarka ku fashilmeen.
Si kastaba ha ahaatee, dagaalkaan ayaa imaanaya xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay horey u shaacisay inay billaabeyso duulaan ka dhan ah dagaalyahanadda Al-shabaab, iyadoona illaa iyo haatan aan la ogayn in dagaalkaan uu qeyb ka yahay duullaanka ay dowladda hore u shaacisay iyo inkale.